ပူဇော်ခြင်း ၂ မျိုး | မေတ္တာရိပ်
← ဆင်းတုတော်ကိုးကွယ်ရခြင်းနှင့် ရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ
သာသနာနှင့် ဂန္ဓာရပညာ →
ပူဇော်ခြင်း ၂ မျိုး	Posted on September 6, 2009	by mettayate ဗုဒ္ဓကို ပူဇော်ခြင်း ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။
အာမိသပူဇာ – ဆွမ်း သင်္ကန်း ကျောင်း ဆေး ပန်း နံ့သာပြောင်း။
ဓမ္မပူဇာ – မဂ်ဖိုလ်ရကြောင်း ၀ိပဿနာတရားကို နာကြားအားထုတ်ခြင်း။
ဒီ ၂ မျိုးမှာ ဗုဒ္ဓက ဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာကို ပိုနှစ်သက်တော်မူပါတယ်။
သာဓကအားဖြင့် မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံခါနီး ရဟန်းရှင်လူ နတ်ဗြဟ္မာ အားလုံးနီးပါး ဘုရားရှင်နားမှာ လိုအပ်သမျှအနီးကပ်ပြုစုကြပါတယ်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက အဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာ အတ္တဒတ္တထို့ အမည်ရှိတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါး မပါ ပါဘူး။ ဒါကို ရဟန်းတွေက မကျေနပ်လို့ မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားတော့ မြတ်စွာဘုရားက အတ္တဒတ္တမထေရ်ကို ခေါ်တော်မူပါတယ်။ ပရိသတ်အားလုံးရှေ့မှာ
ဗုဒ္ဓက “ချစ်သား အတ္တဒတ္တ ပရိနိဗ္ဗာန်စံခါနီး ငါဘုရားကို ရဟန်းရှင်လူ အားလုံးလာရောက်ပြုစုကြသော်လည်း သင်ချစ်သား တစ်ခေါက်မှ မလာဘူးဆိုတာ မှန်သလား။”
“ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ မလာရောက်တာလဲ ချစ်သား။”
“မှန်ပါ။ ဘုရားရှင်ဟာ ဝေနေယျတွေအားလုံး မဂ်ဖိုလ်ရဖို့အတွက် ပွင့်တော်မူလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါလဲ ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီအချိန်လေးမှာ ရဟန္တာဖြစ်အောင် ကျင့်ပြီး ဗုဒ္ဓကို အရဟတ္တမဂ်၊ အရဟတ္တဖိုလ်ဆိုတဲ့ ဓမ္မပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တရားကျင့်နေလို့ မြတ်စွာဘုရားထံ ရောက်မလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ လို့လျှောက်တယ်။”
ဘုရားရှင်က ခုလိုတိတိကျကျ ပြတ်ပြတ်သားသား မိန့်ကြားတော်မူတယ်။
သတ္ထာကဿ သာဓုကာရံ ကတွာဘိက္ခဝေ
ယဿမယိ သိနေဟောအတ္ထိ၊ တေန အတ္တ ဒတ္ထ
နဟိဘိက္ခဝေ ဂန္ဓာဒီဟိ ပူဇေန္တာမံ ပူဇေန္တိ၊
ဓမ္မာနုဓမ္မ ပဋိပတ္တိယာ ပနမံပူဇေန္တိ၊
တသ္ဓာ အညေနပိ အတ္တဒတ္ထ သဒိသေနေ၀
ဘ၀ိတဗ္ဗ န္တိ
မြတ်စွာဘုရားသည် ထို အတ္တဒတ္တရဟန်းအား သာဓုခေါ်ခြင်းကို ပြုတော်မူပြီး၍ –
အိုရဟန်းတို့ အကြင်သူအား ငါဘုရား၌ ချစ်ခင်ကြည်ညိုခြင်းရှိ၏။ ထိုသူသည် အတ္တဒတ္တထေရ်ကဲ့သို့ ဖြစ်သင့်၏။
အိုရဟန်းတို့ အကြောင်းပြရလျှင် နံ့သာစသည်တို့ဖြင့် ပူဇော်သောသူတို့သည် ငါဘုရားကို ပူဇော်သည် မမည်ကုန်။
လောကုတ္တရာတရားအားလျော်သော အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် ငါဘုရားကို ပူဇော်သည်မည်ကုန်၏
သို့ဖြစ်၍ တစ်ပါးသောသူသည်လည်း အတ္တဒတ္ထရဟန်းနှင့်တူသည်သာ ဖြစ်ရာ၏။
ပစ္စည်းလေးပါး ပန်း နံ့သာတွေနဲ့ ပူဇော်တာဟာ ငါဘုရားကို တကယ်ပူဇော်ရာမရောက်သေးဘူးတဲ့။ ၀ိပဿနာကိုပွားများကျင့်ကြံမှသာလျှင် ငါဘုရားကို တကယ်ပူဇော်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓက အာနန္ဒာကို –
ဟောတိ ဂရုကတာဝါ မာနိတောဝါ (ပ) အနုဓမ္မစာရိနောတိ အာနန္ဒ သိက္ခိတဗ္ဗံ။
အို အာနန္ဒာ ပန်းနံ့သာတူရိယာ စသော ပူဇော်ဖွယ် မျိုးစုံတို့ဖြင့် ပူဇော်ခြင်းဟူသော ဤမျှလောက်ဖြင့် လူနတ်တို့သည် ငါဘုရားကို အရိုအသေပြုအပ်သည် မမည်သေး။ အလေးပြုအပ်၊ မြတ်နိုးအပ်၊ ပူဇော်အပ်၊ ပသအပ်သည်မမည်သေး။
အို အာနန္ဒာ ရဟန်းယောကျာ်းဖြစ်စေ၊ ရဟန်းမိန်းမဖြစ်စေ၊ ဥပါသကာဖြစ်စေ၊ ဥပါသကာမဖြစ်စေ၊ အကြင်တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်နှင့်လျော်သော အကျင့်ကို ကျင့်လျှက်နေ၏။
ထိုသို့သောသူသည် ငါဘုရားကို ရိုသေသည်မည်၏။ အလေးပြုသည်မည်၏။ မြတ်နိုးသည်မည်၏။ အမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့် ပူဇော်သည်မည်၏။ ပသသည်မည်၏။
အို အာနန္ဒာ သို့ဖြစ်၍ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်နှင့်လျော်သောအကျင့်ကို ကျင့်ကုန်လျှက် ငါတို့နေထိုင်မည်ဟု သင်တို့ သည်လိုအားထုတ်ရမည်။ အာနန္ဒာ
မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်း “ကမ္ဘာပေါင်းလေးင်္ချေနှင့်တစ်သိန်းကာလပတ်လုံး ပါရမီစရိယ၊ စာဂတို့ကို အလွန်ခဲယဉ်းငြိုငြင်စွာဖြည့်ကျင့်၍ ဘုရားဖြစ်တော်မူရခြင်းသည် နတ်လူတို့အား မဂ်ဖိုလ်ကို လက်ငင်းရစေရန် အလို့ငှာသာဖြစ်ဒ။ ပန်းနံ့သာစသည်ဖြင့် အပူဇော်ခံရန် အလို့ငှာ ရည်ရွယ်တော်မူသည် မဟုတ်ချေ။ ထိုသို့သော် ဧရာမကုသိုလ်ကြီးကိုပြုရပေပြီဟု ရောင့်ရဲအားရပြီး မြတ်သည်ထက်မြတ်သော သီလ၊ သမထ၊ ၀ိပဿနာကုသိုလ်ဟူသော နိယျာနတို့ကို အားမထုတ်ဘဲနေလျှင် ယခုဘ၀မှာ မဂ်ဖိုလ်မရသည် သာမက ၀ဋ်ဆင်းရဲမှ မထွက်မြောက်သေးသာတည်း။ သည်မျှမကာသေး ထိုသို့သော ပူဇော်ခြင်းသည် ဘုရားသာသနာတော်ကို တစ်နေ့မျှ ယာဂုတစ်ကြိမ်သောက်မျှပင်တည်တန့်စေနိုင်သည်မဟုတ်။”
From; မဂ်တား ဖိုလ်တား အန္တရာယ်များစာအုပ်။ လူငယ်များအတွက် ဂမ္ဘီရ၀ိပဿနာအတွဲ ၁နှင့် ၂ စာအုပ် အရှင်ကေလာသ- မြတ်ဗုဒ္ဓ ဓမ္မအနှစ်ချုပ်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ဆင်းတုတော်ကိုးကွယ်ရခြင်းနှင့် ရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ
2 Responses to ပူဇော်ခြင်း ၂ မျိုး
Ni Ni Myint says:	September 19, 2009 at 12:38 pm	I like it very much.Please send me the damma sites if it possible for you every day or every week.Thank you.
Reply	mettayate says:	September 19, 2009 at 12:51 pm	Hi Ni Ni Myint, Thank you for your comment. You can find Damma sites at the right side bar of my blog which I have known or Damma books in ‘Damma books’ cateorgy if you want. Most of my posts are extracted from the Damma books written by ‘Ashin Zawana (metta shin) Shwe Pyin Thar and I have uploaded all I got in that catergory.